Welcome to Aayaha Nolosha » SANADKA CUSUB “MAXAA KUU QORSHE AH…?”
SANADKA CUSUB “MAXAA KUU QORSHE AH…?”
Waxa dhacda waqtiyada qaar qof sanadka oo dhan hurday, qayilaayay, meel ka sheekeeynaayay ama wax aan dhaamin waxyaabahaas ku foogganaa, inta badan in uu ku yidhaahdo “Sanadka cusub ayaan u dabbaal dagayaa”.
Cajiib!! bal iigu bushaaree waxa aad u damaashaadayso ee aad ka midha dhalisay sanadkii tegay.
Malaga yaabaa in ay ka mudnayd inta aad meel fadhiisato, oo aad naftaada canaanato kuna tidhaahdo “Nafyahay sanadkii tegay waxba ma aan qabsan, khasaare ayuuna igu dhaafay iyo macna-darro, ee maxaad yeeli ama arrin ah ee aad haysaa kan hadda bilaabanaya..?”
Inkastoo islaamku sanad u gaar ah leeyahay, haddana kolayba waynu adeegsanaa kan kale ee Miilaadiga. Laakiin kan islaamka iyo kan kaleba midkoodna ma bannaanaa Diin ahaan in loo dabbaal dego oo xaflado lagu soo dhaweeynayo loo dhigo. Sababtoo ah sanad kasta oo cusub ma aha mid inaga uun gaar inoo ah ee ummad kasta xilligeeda ayuu sanad cusub u bilowdaa una dhammaanaayay.
Meelna kuma xusna in lagu deydo dad gaar ah oo u dabaaldegaya sanad cusub iyagoo ku hawlan xaflado lagu soo dhaweynayo. halka dadka wax fahamsan farriinta ay xambaarsanaayeen iyo fahanka ay nolasha u lahaayeen ay ahayd mid marnaba aan u ogalaanayn wax liita oo aan macno ku fadhiyin in ay sameeyaan ama ay qarash iyo waqti geliyaan.
Inta badan qof han iyo himilo durugsan lihi iskuma hawlo waqtina kuma bixiyo dabaaldeg iyo howlo kale. Laakiin wax badan ayuu is weydiiyaa oo waa uu xisaabtamaa, sababahaan daraadood:-
Ugu horeyn da’daadii gu’ baa ku biiray, taas oo macnaheedu yahay cumrigaagii iyo nolashaadii adduun sanad baa ka go’ay.
Waqti badan ayaa kaasoo lumay sanadkii dhamaaday. Markaad waqti lumisana inaad ka murugooto mooyee xaflad looma dhigto.
Qof kasta oo horumar iyo badhaadhe ka fakaraya sanadkiisa cusub waa mar kasta oo uu xaqiijiyo yoolka iyo hiraalada nolasha uga degsan mid ka mid ah ee ma aha mar kasta oo uu sanad dhammaado.
Waa qof mar walba faraxsan. Sababtoo ah waa qof garanaya sababta jiritaankiisa, markaa maalin kaliya kuma soo koobo farxaddiisa.
Qofka aan hadaf lahayni sanadkoo dhan war war iyo walaac ayuu ku nool yahay, sidaa daraadeed sanadka cusub waa xilliga kaliya ee uu farxo, waayo wuxuu mar kasta is leeyahay kan ayaa malaha kaaga wanaagsanaan doona kii hore. laakiin qofkaasi (waa qofka hadafka leh) sanadkoo dhanna wuu faraxsan yahay sababtoo ah nolasha ayuu fahamsan yahay. Laakiin taa ka soo hor jeedkeeda markuu sanadku dhamaanayo waa marka kaliya ee uu dareemo murugo; Waayo wuxuu ogyahay in ay kala badan yihiin awoodaha Alle ku maneystay badnidooda iyo waxa uu qabtay yaraantooda. Markaa jaanis uu ku farxaa uma bannaanaa waqtigan kala guurka ah.
Wuxuu ogyahay in uu leeyahay maalmo la farxo oo waliba sanadka dhexdiisa; kuwaas oo Alle u jideeyay in uu ku farxo soona dhaweeyo. Waana maalmaha ciideed iyo maalmaha Jimcaha, wuxuuna ku qaabilaa jawi dagan oo qurux badan. kuma soo dhaweeyo bood bood iyo dambi ee subaxa horaba salaad iyo cibaado Alle ayuu ku qaabilaa. Isagoo Alle ugu mahad naqaaya nimcooyinkiisa oo aan ku kufrinahayn.
Sababahan iyo kuwa kale ayaa ka mid ah farqiga u dhexeeya qofka nolasha han iyo hiigsiba ka leh iyo ruuxa kale u dabbaal dagida maalmahan oo kale.
Inaad afka ka tidhaa sanad wanaagsan waa salleelo. Waayo maalin kasta waxa aynu Alle agtiisa ka filanaynaa maalin, bil iyo xilli wanaagsan oo kii hore inooga khayr badan. Laakiin waxa daran markaad lacag ku bixiso xaflad iyo damaashaad adigoo ula niyoonaaya soo dhaweynta sanadka cusub.
Maalmo badan oo mudan in la farxo isla markaana maalmaha kale ka khayr badan ayaa ka buuxa sanad kasta wax ka mid ah: maalmaha la soomo sida: ramadaanta, cashuura, carafa; ciidaha iyo jimcayaasha. Sidoo kale maalin kasta oo waagu kuu baryo adigoo caafimaad qaba waa kuu waqti cusub iyo rajo aad ka sii qabto in aad saacado ama ayaamo adduunka ku sii noolaato. Taas oo fursad kuu siinaysa in aad ka faa’iideysato. Saxdo waxaad hore u qaladday, horumariso oo sii wanaajisid waxa aad saxday.
Sanadka cusub in aad u dabbaal dagto waxaa ka mudan in aad isweydiiso maxaa kuu qabsoomay sanadkii hore; maxaase kuu qorshe ah sanadka dambe haddii Allaha awoodda leh kugu simo.
maalin kasta Alle ha inooga dhigo mid wanaagsan oo khayr badan. Hana ina waafajiyo camal iyo cibaado suuban. Amiin…
W/D: Ibraahin Aw Xasan (Waaberi)